Is biirsaday Caan - Talooyin ku Saabsan Ragga Casriga Ah | Ragga Stylish
Is biirsaday caan ah
Alicia tomero | | Nafaqeyn
Is biirsaday waa noocyo dhadhamis ah ay ku jiraan hal ama dhowr isku-dar ah oo cabitaanno aalkolo leh liinta, dhadhanka miraha, casiirka, caanaha ama kareemada. Qaarkood xitaa waxaa lagu diyaariyaa sonkor, malab ama dhir udgoon, ilaa kala duwanaanta isku dhafka iyo isku darka waxay noqon kartaa mid aan xad lahayn.
Ku dhowaad qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu cabo cabitaannada iyo noocyada kala duwan ee adduunka ee isku-dhafka mar kasta oo ay ka gudubto da'da sii kordhaysa, casriga ah ee dhadhanka qalaad iyo isku dhafka. Laakiin yeynaan ilaawin in is biirsaday taariikhi ah ay yihiin kuwa nolosha oo dhan iyo tan dhabta ah. Qaar leh dhadhan aad u fiican oo aan waligood ka bixi doonin qaabka. Qodobkaan waxaan ku ogaaneynaa kuwa ugu caansan cocktails had iyo jeer caan ku ahaa oo aad jeceshahay inaad dib u soo kabato.
1 Is biirsaday caan ah
1.4 Pina Colada
1.6 Dhiiga Mary
Lama oga hubaasha asalkeedu, laakiin waxay noqotay is biirsaday caadi ah, maadaama ay jireen dad caan ah oo arkay iyagoo is cunaya is biirsigan. Waxaa ka mid ahaa Madonna iyo Sarah Jessica Parker.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin:
1 1/2 Oz. Citron Vodka (dhadhan leh lmagnet) (1 ounce waa 28 g)
1 oz Casiirka liinta
2 oz Casiirka karamberriga
Dhammaan maaddooyinka waxaa lagu shubaa gariir buuxa oo baraf ah oo si aad u wanaagsan u ruxa. Waxaa loogu adeegaa galaas bilaa baraf ah, oo lagu sharraxay liin dhago ama rind. Afka muraayadda waxaa lagu qoyn karaa casiirka lime ama sonkor.
Noocani wuxuu dib ugu noqonayaa makhaayad ku taal Rancho La Gloria, oo u dhexeysa Tijuana iyo Rosarito. Waxaa loo sameeyay qoob-ka-ciyaare kaasoo xasaasiyad ku lahaa cabitaanno fara badan marka laga reebo tequila oo halkaas ayay ku abuureen is biirsadan saxda ah.
1 caballito (koob yar) oo tequila ah.
1 qanjaruufo oo ah sedex ilbiriqsi.
Casiirka 1/2 lime ama liin dhanaan
Muraayadda aan ku diyaarinayno is biirsaday, ku dar baraf badan oo la jajabiyey kuna dar maaddooyinka.Waxaad ku qurxisaa gabal lime ah ama liin ah, oo muraayaddu ay si qabow ugu dhammaato geeskeeda milix.
Sheekadu waxay sheegeysaa in cabitaankan la hindisay qarnigii XNUMXaad markii qof Ingiriis ah oo gaar loo leeyahay uu hindisay cabitaankan oo leh astaamo (ruug ceeriin ah oo aan gabowneyn), iyadoo loo baahan yahay in lagu daro maaddooyinka kale oo lala yimaado isugeyn dhammaystiran. Maanta waxaa lagu diyaariyey rumanka Cuba waana cabitaanka ugu badan ee la raadsado dabaqyada xagaaga.
4 cl oo cambaar cuban ah
3 cl oo liin dhanaan ah
2 qaado oo sonkor sonkor ah
6 caleenta reexaanta
1 liin jeexan iyo 1 laamood oo spearmint ah si loo qurxiyo.
Ikhtiyaar ahaan, dhawr dhibcood oo ah angostura, cabitaan kor u qaada dhadhanka.
Galaas waxaan ku darnaa sonkorta, casiirka liinta iyo caleenta reexaanta. Waxaan tuujinaa ama si fudud u burburinaa caleemaha si aan uga soo saarno nuxurkooda.
Ku dar wax yar oo soodhaha ah oo ka buuxi galaaska baraf la jajabiyey halkaas oo aan ku dari doonno rummada oo aan ku dhammaystiri doono soodhaha. Walaaq kuna qurxin liin dhanaan iyo xoogaa geedo yaryar oo reexaan ah.
Caannimadeeda waxay dib ugu laaban doontaa daabacaadyada iyo xusidda dhowr wargeysyo Mareykan ah tan iyo 1950, oo laga soo ururiyay Cuba. Laakiin hal abuurkeedu waxaa laga yaabaa inuu ku bilaabmay qaabaynta kabtan qarnigii sagaal iyo tobnaad.
3 cl oo ruug cad ah.
3 cl kareemka qumbaha.
9 cl oo casiir cananaas ah.
Waxaan ku dhejineynaa maaddooyinka shaker baraf la jajabiyey. Isku qas ilaa aad ka hesho isku-darka kareemka. Ku shub muraayadda oo ku qurxin cufka cananaaska.
Taariikhdeeda waxay ka soo bilaabmaysaa soo-saariddii is-biirsaday ee milkiileyaasha dhulka ee Sao Paulo intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad xaflado muhiim ah. Ujeeddadiisu waxay ahayd in la ogeysiiyo bakooradda sonkorta ee gobolkiisa.
120 ml oo ah 'cachaça', oo ah Baraasiil Baraasiil ah oo laga sameeyay casiir sonkor sonkor leh.
2 qaado oo macmacaan oo sonkor bunni ah.
Casiirka 2 liin ama casiirka liinta
Qaybaha liinta u kala jar qaybo oo ku dar muraayadda oo ay la socdaan sonkorta. Waxaan u burburinaa maaddooyinka si ay u sii daayaan casiirkiisa. Marka xigta waxaan ku darnaa cachaça iyo liinta ama liinta dheecaanka iyo barafka la jajabiyey, walaaq oo waxaan ugu adeegnaa jajab liin dhanaan ah ama liin dhanaan ah.
Waa is biirsaday sumcad caalami ah, oo laga sameeyay baar ku yaal Paris.
3 qaybood Vodka
6 qaybood casiir yaanyo ah
Qanjo yar oo milix ah iyo basbaas madow
3 dhibcood oo ah maraqa Worcestershire ama Suugada Worcestershire
3 dhibic oo maraqa Tabasco ah
150 garaam oo baraf la jajabiyey
10ml oo liin dhanaan ah ama liin dhanaan ah.1​
Isku qas dhammaan walxaha ku jira gariir kuna adeego galaas qabow leh liin dhanaan ama liin dhanaan iyo cusbo aan badnayn.
Waxay asal ahaan ka soo jeedaa Santiago de Cuba waxaana lagu diyaariyaa badanaa rooma cad iyo liin dhanaanta, inkasta oo noocyadeeda ay bakhtiyeen, dib u soo nooleynta noocyo si siman u wanaagsan.
50 ml rum cad
25 ml oo liin dhanaan ah ama liin dhanaan ah
1 qaado oo sonkor ah
Waxaan isku darnaa walxaha ku jira galaas oo isku dar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Is biirsaday caan ah
Sida fin looga saaro